winter - Synonyms of winter | Antonyms of winter | Definition of winter | Example of winter | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for winter
Top 30 analogous words or synonyms for winter
Deathrock လွှမ်းမိုးသောအမျိုးသမီး deathrocker များတွင် Eva Oနှင့် Voodoo Church ၏ Tina Winter တို့ပါဝင်သည်။
ဂျန်နာရာ ၂၀၀၄ ၌ ယခင်အယ်လ်ဘမ်သုံးခုမှ ပေါက်သီချင်းများကို စုစည်းပြီး အယ်လ်ဘမ်တခု ထုတ်ပြန်သည်။ ၎င်းနောက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၄ ၌ I Love School နှင့် Winter Diary ပါသော ငါ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းဟူသော လေးခုမြောက် အယ်လ်ဘမ်ကို ဖြန့်သည်။
Old-time music Lebanon, Tennessee မှ Breakin’ Up Winter၊ Winfield, Kansas မှ Winfield Music Festival နှင့် Smithville, Tennessee မှ Smithville Fiddlers’ Jamboree and Crafts Festival (၁၉၇၂တွင် စတင်ခဲ့သည်)။
နယ်(လ်)ဆင် ရော်လီလှာလှာ မန်ဒဲလား လျှို့ဝှက်စုံထောက်တစ်ဦးဖြစ်သော Gordon Winter (ဂေါ်ဒန်ဝင်းတား) ၏ ၁၉၈၁ memoir Inside BOSS(ဘော့စ်အတွင်းမှ ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း) တွင် ၁၉၆၉ ခုနှစ်၌မန်ဒဲလားအားထောင်မှ ကယ်ထုတ်ရာတွင် ၎င်းပါဝင်ခဲ့သည်ဟု ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် South African intelligence (တောင်အာဖရိက ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့) ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး မန်ဒဲလား ထွက်ပြေးရာ၌ ပြန်ဖမ်းမိစဉ်တွင် ပစ်သတ်ရန် စီစဉ်ထားခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။ ထိုလုပ်ကြံမှု အစီအစဉ်ကို British Intelligence (ဗြိတိသျှထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့)မှ ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျွန်အွန်ဂျီ Jung was then cast inasupporting role in the 2013 melodrama "That Winter, the Wind Blows". She won Best Performance at the 2nd APAN Star Awards and New Star Award at the SBS Drama Awards.
ဂျွန်အွန်ဂျီ ဂျွန်အွန်ဂျီ Jung Eun-ji (မွေးနာမည် ဂျွန်ဟေးရန် Jung Hye-rim၊ ၁၈ ဩဂုတ်လ ၁၉၉၃) သည် တောင်ကိုရီးယား၏ အနုပညာကြယ်ပွင့် အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်နှင့် သီချင်းရေးစပ်သူ ဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယား မိန်းကလေးတေးဂီတအဖွဲ့ Apink ၏ အဓိကအဆိုရှင်အဖြစ် လူသိများသည်။ ဂျွန်ဟာ အချစ်ဇာတ်လမ်း coming-of-age နှင့် "Reply 1997" (၂၀၁၂) တို့တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ သူမဟာ"That Winter, the Wind Blows" (၂၀၁၃), "Trot Lovers" (၂၀၁၄) နှင့် "Cheer Up!" (၂၀၁၅) တို့တွင် အဓိကနေရာမှ သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့သည်။
ချန်ဆားမြို့ The four seasons are distinct. The summers are long and hot, with heavy rainfall, and autumn is comfortable with abundant sunlight. Winter is comparatively dry (but somewhat damp and overcast) and rather brief, but cold snaps occur with temperatures occasionally dropping below freezing.
ရှန်ဟိုင်း မေဂျာ ၂၀၁၆ ရှန်ဟိုင်း မေဂျာ ၂၀၁၆ () Winter Major ဟုလည်း လူသိများပြီး လာမည့် ဒိုတာ ၂ ပြိုင်ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော ရှန်ဟိုင်း မေဂျာကို ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် ၂၀၁၆ မတ်လ ၂ ရက်မှ စတင်ကာ မတ်လ ၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ဒိုတာ ၂၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ဒုတိယ မေဂျာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း ၁၆ သင်းပါဝင်ပြီး ယင်းအသင်းများအနက် ၈ သင်းကိုမူ တိုက်ရိုက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး ကျန် ၈ သင်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ကျွမ်းကျင်အသင်းများကို ပြိုင်ပွဲအတွက် အရည်အချင်းစစ်ပြီး ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
တာလီမြို့ Tempered by the low latitude and high elevation, Dali hasamild subtropical highland climate (Köppen "Cwb"), with short, mild, dry winters, and warm, rainy summers. Frost may occur in winter but the days still generally warm up to or more. During summer,amajority of the days features some rainfall, and daytime temperatures rise to . A great majority of the year's rainfall occurs from June to October.
ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်း From the very beginning, the Soviets' operation entailed elaborate denial and deception, known in the USSR as "maskirovka". All of the planning and preparation for transporting and deploying the missiles were carried out in the utmost secrecy, with onlyavery few told the exact nature of the mission. Even the troops detailed for the mission were given misdirection, told they were headed foracold region and outfitted with ski boots, fleece-lined parkas, and other winter equipment. The Soviet code name, Operation Anadyr, was also the name ofariver flowing into the Bering Sea, the name of the capital of Chukotsky District, andabomber base in the far eastern region. All these were meant to conceal the program from both internal and external audiences.